တရုတ်မိန်းကလေးများဖြစ်ကြ"ရိုးရှင်း"။ နှင့်အခြားအကြံအစည်အပေါ်အခြေခံပြီးလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအစည်းအဝေး-ဟင်းချိုတရုတ် - ဗီဒီယိုစကားပြောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း! နိုင်ငံအားလုံး၊နိုင်ငံခြားရေး၊လောကဓာတ်လုံးကို။
ဗစ် ကတရုတ်ရိုက်မှာနေထိုင်နေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိသူပုံနှိပ်ထုတ်ဝေအတွက်တရုတ်နှင့်ဗမာအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာဆက်စပ်ရန် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဒိုင်းနမစ်။ ဒိုင်းနမစ်များအစည်းအဝေးကိုအမြဲစိတ်ဝင်စားဖို့လေ့လာဖို့အတွက်၊အထူးသဖြင့်အပြောင်းအလဲတွေဟာအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများသို့မဟုတ်လူများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအရပ်တို့ကိုရိပ်အခြို့သောလုပ်ရပ်သို့မဟုတ်ရခ်ိန္။ တရုတ်နိုင်ငံအတွက်၊လက်ရှိလမ်းကြောင်းသစ်သည်"အလင်းမိန်းကလေးများ"၊အရာအခြေခံအပေါ်အချို့သောစိတ်ကူးကောင်လေးတွေဟာမိန်းကလေး(များသောအားဖြင့်နေထိုင်မှုအတွက်အရှေ့နှင့်တောင်-အရှေ့အာရှနိုင်ငံများ)၏မျက်နှာသာအတွက်နိုင်ငံခြားလူတို့။ ဤအကြောင်းစိတ်ဝင်စားကြောင့်ငါ့ကိုတက်လာအတွက်အများအပြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးစကားပြောဆိုချက်တွေကိုသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတရုတ်နဲ့ပြည်ပမှာ၊အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောယဉ်ကျေးမှုအခင္းအက်င္း။ နေ့လည်စာမှာ၊ငါအတဲ့ဆွေးနွေးချက်အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူ-တစ်စုံတစ်ဦးကနက်ရှိုင်းစွာပါဝင်ပတ်သက်အတွက်တရုတ်မီဒီယာလောကအကြောင်းယဉ်ကျေးမှုအလေးချိန်နှင့်အရေးပါမှု၏ဤအကြောင်းအရာ။ သူဖော်ပြခဲ့သည်ဤအကြောင်းအရာအဖြစ်နာကျင်သို့မဟုတ်ထိခိုက်မခံတဲ့ဧရိယာကိုထိခိုက်နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှု၊မာနထောင်လွှားသောကြောင့်အထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အတွက်တရုတ်စကား။ အခေါ်အဝေါ်"လွယ်ကူသောမိန်းကလေး"အနှံ့အပေါ်တရုတ်နှင့်အင်တာနက် ဒါဟာမကြာခဏတွေ့ရှိသာဋီကာဆောင်းပါးများသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုနှင့်အတူ ။ ဥပမာအားဖြင့်၊နွေရာသီအတွက်၊တဇာတ်လမ်းအစပျိုးတစ်ခုအပူအငြင်းရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်အားဖြင့်စပိန်လိင်ဆက်ဆံနှင့်အတူတရုတ်အမျိုးသမီးအတွက် ။ အဆိုပါတုံ့ပြန်မှုနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေမသကဲ့ရန်ဒေါသကိုမြင်သောနိုင်ငံခြားသားကြည့်၊တရုတ်မိန်းကလေး၊သာသကဲ့သို့"စျေးပေါ"နှင့်"တစ်ကစားစရာ။"အောင်မျိုးသမီးများအတွက်တရုတ်နှင့်အတူစွဲလမ်းနေကြသည်င္ငံျခားသားမ်ား။"ိင္ငံတကာအဆ"။ အမိန့်၌မစွဲ၊တရုတ်သူအမျိုးသမီးနှင့်အတူစွဲလမ်းနေကြသည်င္ငံျခားသားမ်ားအမေး"တရုတ်နေ့စဉ်"။ အများစုကလူမည်းကြောင်းထင်တရုတ်မိန်းကလေးများဖြစ်ကြ"လွယ်ကူသောမိန်းကလေး"။ အမေးများအတွက်အပိုစတာပေါ်မှာ ၊ေမးဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ပလက်ဖောင်း။ ဆိုက်ခဲ့သွားရောက်ကြည့်ရှုပိုထက်အကြိမ်တစ်သန်း။ တခါတရံထင်ရသောအချက်တစ် ဆက်ဆံရေးတည်ရှိနိုင်အစဉ်အမြဲအမျက်ဒေါသ:"တကယ်တော့ခုနှစ်၊အစိုးရအဖွဲ့ဗီဒီယိုအတူရက်စွဲတစ်ခု၊တရုတ်မိန်းကလေး၊ဒေါသကိုအင်တာနက်အသုံးပြုသူများ"ဖတ်သောခေါင်းစဉ်၊သောကြာ၏တစ်ဦးအချပ် ။ ဒါဟာအရေးမပါဘူးဆိုရင်အောက်၌ဖုံးထား ေအဘီဘီယို၊အမှန်တကယ်အခေါ်"ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ဖို့တရုတ်မိန်းကလေး"ကြောင့်သရော်စာအဘယ်သို့သောအကြောင်းအဖြူရောင်အမျိုးသားအလုပ်ကိုမလုပ်ကြဘူးအခါသင်သိမ်းထားချင်တရုတ်မိန်းကလေးတစ်အထိ။ လူအများစုဟာအနည်းဆုံးယံကိုသတိပြုမိကြယ္ရာနဲ့ဆက်စပ်တရုတ်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး။ ကျွန်တော်ခန့်မှန်းချက်တစ်ခုအဖြစ်အမေရိကန်၊တရုတ်၊ငါအစဉ်အမြဲလူသိများတစ်ဦးမှိုင်းကတရုတ်အမျိုးသားများအစော(မစော)တရုတ်မိန်းကလေးများဖြစ်ကြ"လွယ်ကူသော"။ ဆန့်ကျင်ဘက်အခြမ်းကိုဒီအကြွေစေ့အ နှင့်အန္တရာယ်ရှိသောစိတ်ကူး၊ဟုတ်ပါတယ်၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လျစ်လျူမရှုနိုင်သလားတည်ရှိကြောင်း။ ဒါကြောင့်ငါစောင့်ကြည့်ဖို့လိုအောက်ပါဗီဒီယို(ငါပေး၏နောက်ထပ်ဆွေးနွေးမှုအများ၏အမြင်တရုတ်နှင့်အာရှယောက်ျားလေးများကမ္ဘာအဝှမ်း)။ တုံ့ပြန်မှုမှငါ့က္ႏွ ကောင့်အသစ်များ၏၊အစဉ်တရုတ်မဆိုရေးသားခြင်း(တကယ်တော့၊ဘာမှမနိုင်)ကိုယ်စားပြုပြီးအနည်းဆုံးအချို့၏အစိတ္အရာပေါင်းများစွာသန်းပေါင်းများစွာ၏တရုတ်အွန်လိုင်း။ အချို့လူများကလွယ်ကူသောမိန်းကလေးဖးတည်ရှိသောကြောင့် လွယ်ကူမိန်းကလေးတို၏ပုံစံအတွက်ရည်မှန်းချက်အဖြစ်မှန်အကြောင်းတရုတ်မိန်းကလေးများနှစ်သက်နိုင်ငံခြားသားနှင့်ဟောလိဝုဒ်နှင့်အခြားအနောက်မော်ဒယ်များများ၏အလှတရားများထိုးဖောက်တရုတ်မသိစိတ်တစ်ပိုင်း၊အောင်င္ငံျခား၌ဆွဲဆောင်မှုကြည့်ပါနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ အခြားအမျိုးသားရေးအဖွဲ့အခံရအကြမ်းမဖက်ဆီသို့တရုတ်မိန်းကလေးများသည်မလွယ်ကူနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မိန်းကလေးများမှအရှေ့တောင်အာရှသို့မဟုတ်အခြားအစိတ်အပိုင်း၏အရှေ့အာရှသောကြောင့်ဖြစ်ခြင်း"လွယ်ကူသော"ဒီအဘို့"ရွှေတူး"ဧည့္ခန္းရိွသည္ငဲ့။ အချို့မှတ်ချက် နှင့် ၊အပြစ်တင်သောသူအမျိုးသမီးများမှာလည်းတာဝန်ရှိသည်"ပြင်ပအမှိုက်သရိုက်"အဖြစ်၊အဘယ်သူသည်ငွေနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာစဉ်င္ငံျခားသားမ်ားကိုအပြစ်င္ငံျခားသားမ်ား၏အလွန်အကျွံ ။ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး၊ဒီကြသည်မဟုတ်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမခေါ်မယ်လို့အကောင်းမြင်၊သူတို့ထံမှဝေးဖြစ်ကြပြီးစဉ်းစားဟန်နှင့်ကွဲပြားကြောင်းအဖြေငါ့သူများကိုပေး:သငျသညျအကွောငျးပွော၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဟောလိဝုဒ်(-ဒုတိယ တစ်တိုင်)၊ဆိုတဲ့အချက်ကိုလူငယ်များအပြားတစ်ဦးချင်းစီင္ငံျခားလေ့လာရန်တရုတ်(အဖြစ်ကိုကောင်းစွာအဖြစ်ယဉ်ကျေးမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဂျပန်မီဒီယာ(။ တချိန်တည်းမှာ၊အများအပြားပါဝင်ရန်အလေးပေးသောနည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်ပြသရန်တည်ရှိ၏ကြယ္ရာ၊နှင့်အများအပြားရှိပါတယ်တရုတ်လူမျိုးမဟုတ်ကြဘူးသောသူထားသမားရိုးကျနေကြအပေါ်အုတ်။ ဖြစ်ကောင်းအရေးအပါဆုံးအချက်သည်အလုပ်အားဖြင့်အသင်တန်းသားများအဆုံးမှာ:မည်သို့ပင်ဆက်ဆံရေးအပေါ်ပုံစံမျက်နှာပြင်သာရှိလူများသောဆက်ဆံရေးကိုအဘယ်ကြောင့်နားလည်သူတို့အတူတူဖြစ်ကြောင်း၊နှင့်အခြားသူများဖို့ရည်ရွယ်ကြသည်မဟုတ်ထင်ကြေး။ အိုး၊င္ငံဖစ္ဘူးကိစ္စရပ်များကိုဆွေးနွေးကြသည်ထင်ထင်နှင့်ပွင့်လင်း၊ဤသည်လူကြိုက်အများဆုံးမှတ်ချက်တို့တွင်ငါ့အဗီဒီယိုနှင့်ပတ်သက်:"တရုတ်အချစ်အဖြူကအရေပြား၊င္ငံျသြဇာလွှမ်းမိုးမှု၊ဒါကြောင့်ဤကဲ့သို့သောရှေးကာလကတည်းက။"ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်တုံ့ပြန်ချက်ငါသိမြင်င့်အကြောင်းလူတွေအများကြီးရှိသည်ယဥ္ေက်းမာန၊ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့အလွန်သိသာအလုပ္တစ္ခုေ။ ဒါဟာအကြောင်းငါ့ကိုအထင်ရပါတယ် လူ့အဖွဲ့အစည်းဆဲနှင့်အတူရုန်းကန်တြျဖစ္ျပီးအမြင်နှင့်ထွက်တွက်ဆဖို့ကြိုးစားနေအဘယျသို့မှန်ကန်သောအဖြေကိုရမည်။ ကျွန်တော်မသေချာဘယ်လောက်ငါ့င့္အမှအကျိုးဖြစ်ထွန်းသော၊ဒါပေမယ့်အရေးအပါဆုံးအရာစကားပြောဆက်လက်နိုင်ပါတယ်ဓိဋ္ဌာန်၊နှိုင်းနှိုင်း၊နှင့်ဖြစ်ကောင်းပင်အားထုတ္မႈမ်ား။ တရုတ်မိန်းကလေးများအတွက်တရုတ်၊ထိုင်ဝမ်နှင့်ဟောင်ကောင်အကယ်စင်စစ်လွယ်ကူများအတွက်အဖြူရောင်ကောင်လေး။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အဖြူနှင့်အမပွုနိုငျရာပေါင်းများစွာ၏ညှိနှိုင်းအတွက်အဲဒီတိုင်းပြည်၊သင်သည်လည်းဖြစ်လာချေ၊အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အခြားအရပ်တွင်သင်နီးပါးအပူတပြင်း။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊တရုတ်အမျိုးသမီးများအတွက်ဤနိုင်ငံတက်ကြွစွာစောင့်၊သူတို့ဂုဏ်ယူသာဖြူ၏။ အားလုံးနီးပါးလူဖြူနိုင်ရုံလိင်ရှိသည်၊ထိုအခါတရုတ်အမျိုးသမီးသုံးစွဲနက်ဖြန်နေ့၊ဟုဆိုသည်ဤအကြောင်းပြောနေအသူမကအများအားဖြင့်အလွန်ရှေးရိုးစွဲမလေး။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီအချိန်အစဉ်အမြဲဖြစ်ပျက်ဤနိုင်ရန်အတွက်၊ဒါပေမဲ့လိင်အမြဲလွယ်ကူသည်၊ဒါကြောင့်အနောက်ခံ။ မဂၤလာပါ၊ဗစ်၊ငါတွေ့ပို့ချအတွက်အသင့်ရဲ့ဆောင်းပါးမှာအလွန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောနဲ့မငါသည်မပြုစေခြင်းငှါသဘောတူနှင့်အတူအရာအားလုံးကိုရေးသားခဲ့သည်။ငါပင်ကြိုးစားခဲ့ရှင်းပြဖို့အားလုံးအလှည့်ကွက်ငါလေ့လာသင်ယူအကြောင်းပထမဦးဆုံးအမိန်းကလေးများအတွက်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ဤစာအုပ်။ သင်ထင်သောအရာကိုပြောပြပါ၊ဤစာအုပ်လည်းအကြောင်းပြောဖို့ဘယ်လောက်အရအနောက်တိုင်းမိန်းကလေးများအတွက်၊တရုတ်နှင့်စပ်စုမိပါတယ်အရာကိုသိရန်အလို့မရဆိုရန်အလွန်ကျေးဇူးအများကြီးသင့်ရဲ့သဘောထား၊အပြောကြရအောင်မကြာမီ၊ငါစိတ်မကောင်းပါသည်ဟုဆိုရန်ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊နိုင်ငံခြားအမျိုးသမီးအားလုံးလွယ်ကူရန်ကြွလာသောအခါမှပိုက်ဆံရြှအမျိုးသမီးတစ်ဦးထံမှသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တိုင်းပြည်၏၊ကြောင်းတစ်ခုခုမှားယွင်းနေသည်နှင့်အတူ၊သင်မြင်ရသွားကြသည်အလွယ်ကူသောနည်းလမ်း၊ အဘယ်သူမျှမနေပါစေသင်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးပြီမှီခို၊သင်၊သင်သူမ၏ချစ်။ အခါတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအထူးသဖြင့်အခါ၊တစ်ဦးရှိပါတယ်အသက်အရွယ်ကွာခြားချက်။ ငါသိမြင်င့်အာရှအမျိုးသမီးများအတွက်ဒီမှာငါတို့၊ အရာအလွယ်ကူဆုံးဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ဖို့၊ကျွန်မထင်တယ်အခါငါဖမ်းမိ၊ငါ့ တယောက်နှင့်အတူသင်ရှာဖွေသတင်းလာရောက်သင်ကြားနေစဉ်၊သင်အခြေခံအားဖြင့်သူ့ကိုချဉ်းကပ်နေစဉ်သူကနေ့လယ်စာရှိခြင်း၊သင်နောက်ထိုင်လျက်သူ့ကိုလာမယ့်နေ့နှင့်အခြားနေ့သင်သာသူ့အိပ်ရာ၊မသိတပြင်လုံးကိုပုရွက်ဆိတ်၊သူလုပ်ခဲ့သမျှသူအလှည့်ငါ့ကိုပယ်သည့်အခါ၊ငါသို့ပြေးနှင့်အတူသူ့ကိုသင်တို့က၊သင်တို့ပြောခဲ့ကြသည်သူငယ်ချင်းများ၊ဘာမှမဖြစ်ပျက်။ ထို့အပြင်၊သူမ၏မိခင်၊ငါသတိထားမိတဲ့သူမကသာဂရုစိုကျကိုကိုယ်အဘို့အ၊ဒါကြောင့်သူမခင်ပွန်းရှိပါတယ်၊အပြည့်အဝအအမပြောနိုင်ပါဘူးထက်ပိုပြီး"ဟုတ်ကဲ့"။ ယနေ့အချိန်တွင်၊ဆ။။အပတ်များမှာရိုးရှင်းပေါင်းတို့သည်အဖက်ဖက်တွင်။ ရောက်သောအခါတရုတ်ယောက်ျားနှင့်အတူနိုင်ငံခြားမိန်းကလေးတစ်ဦး၊လူတိုင်း ။ အခါတရုတ်လူတစ်ဦး နှင့်လိမ်လည်အပေါ်တရုတ်မိတ်ဆွေ၊သူတို့ကမရကြဘူးမဆိုအထူးအနုတ်လက္ခဏာအာရုံစိုက်လွဲရင်ပုံမှန်အတိုင်း။ သို့သော်၊အခါထူးဆန်းတဲ့လူနှင့်အတူတရုတ်မိန်းကလေး၊စုံတွဲတစ်တွဲကြည့်တက်နှင့်ဤဓကစားသို့ရောက်၊သာမန်မိန်းကလေးတစ်ဦးပြဿနာ အဝါရောင်အဖျားရောဂါ၊စသည်တို့ကို။ အခါနိုင်ငံခြားလူကိုကစားနှင့်အတူတရုတ်မိန်းကလေးများဖြစ်လာ၊ဒါကြောင့်ကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊နှင့်အားလုံးအင်တာနက်ကိုကျော်။ သူတို့၏လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုထဲမ-တရုတ်အမျိုးသားများအတွက်။ မရှိတော့ပြီ။ တချို့လူတွေကကိုယ့်ကိုနားမလည်နိုင်အချို့သောအတူတူသူတို့ချင်လဲဆိုတော့သူတို့တွေ၊လူမျိုး၊နှင့်အချို့သောယောက်ျားကစားသောကြောင့်၊သင်သည်ယောက်ျားမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင့်ရဲ့အာရှမျိုးနွယ်ဖြစ်ပါသည်ဒါကြောင့်အလင်းနှင့်လတ်ဆတ်ပြီးလှပသောနှင့်အတူကောင်းမွန်သောအပြုအမူနှင့်အဓိပ္ပာယ်ကိုငါမုန်းအထင္ႀဖြူ (အထူးသဖြင့်အင်္ဂလိပ်-အထူး)သူတို့လုံးဝအနေများအတွက်လျောက်ပတ်သောအမျိုးသားများအတွက်၊သင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်းမနေပါ၊အဝါရောင်အဖျားသည်အစစ်အမှန်ပြဿနာ။ အများဆုံးငါ့သူငယ်ချင်းတွေ၊အာရှမိတ်ဆွေတွေဘယ်တော့မှစေခံဖြူမိန်းကလေးအစဉ်အမြဲနောက်တဖန်အ၊ငါဒေသခံတစ်ဦးတရုတ်မိန်းကလေး။ ငါတကယ်လိုချင်တဲ့အတူနေ့စွဲအပေါ်သွားတစ်အနောက်ပိုင်းမိန်းကလေး၊ဒါကြောင့်ငါသည်ငြူအားလုံးတရုတ်လိုထက္။ ကိုယ့်ထက်သာ တရုတ်နိုင်ငံမှတွေ့ဆုံရန်တစ်ဦးလှပတဲ့တရုတ်မိန်းကလေးကငါ ေၿပာဖို့သင်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အဘို့။ ကျွန်မလက်ထပ်ခဲ့ကြနှစ်ကြိမ်ဖို့အနောက်တိုင်းတွင်တိုင်းပြည်၊သင်ကမယုံကြည်ကြဘူးငါဖြစ်၏သောအမျိုးသမီးတစ်ဦးယောက်ျားဖူးမူးဖူးအရက်၊ငါအလွဲအသုံးချခဲ့ကြနှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်။ ဒီတရုတ်အမျိုးသမီးပြောသောစကားကိုငါကြား၏ဖူးဘူးဒီနိုင်ငံအတွက်။ အများဆုံးအဆင်းလှသောစကားသည်ငါအစဉ်အဆက်ကြုံတွေ့ခံစားဖူး။ နှင့်နောက်ရက်အနည်းငယ်တွင်၊ကျွန်မပျံသန်းရန်တရုတ်နိုင်ငံသို့သူမ၏တွေ့ဆုံရန်။ အဲတစ်စုံတစ်ယောက်လက်ထပ်ဖို့တရုတ်အမျိုးသမီးကောင်းတစ်ကောင်သည်အနှစ်။ အပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မချမီအသက်တာဆုံးဖြတ်ချက်။ အကယ္တရုတ်စောင့်ရှောက်မည်သည့်လျှို့ဝှက်ချက်များကြောင်းသိရန်လိုအပ်သည်၊ငါ့ကိုသိကြကုန်အံ့ကျေးဇူးပြု။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ကျွန်တော်တွေ့တဲ့မိန်းကလေး။ ကျွန်တော်ထင်တရုတ်မိန်းကလေးများအလွန်ချစ်စရာ။ ငါပဲသင်လို။ မသိဘူးလွယ်ကူခဲ့လျှင်သို့မဟုတ်မ၊ဒါပေမယ့်အလွန်ခက်ခဲအကြှနျုပျအဘို့အချိန်းတွေ့ဖို့အမေရိကန်အမျိုးသမီး။ ကျွန်မဟာအမေရိကန်အဖြူ၊နှင့်အလိုအကြှနျုပျကိုပြောပြရန်အကြောင်းတရုတ်မိန်းကလေးများနှစ်သက်။ ကျွန်တော်ထင်တယ်အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်မရှိ ကြီးအမျိုးမျိုး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ငါမျှော်လင့်သင်သည်ငါ၏ရည်းစားပြီးနောက်အနည်းငယ်ရက်စွဲများ။.
አዲስ ጓደኞች በመስጠት ውድ. የእኛ ጣቢያ ይጎብኙ የእርስዎ ቅድሚያ የሚሰጡዋቸውን. አዳዲስ አዳዲስ ግምገማዎች.
ချိန်းတွေ့နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ချက်တင်ကစားတဲ့မိန်းကလေးအွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း တွေ့ဆုံလက်ထပ် ငါလိုအ ချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း အခမဲ့ဗီဒီယိုစကားပြောခန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ လိင်နှင့်ချိန်းတွေ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူယောက်ျားတွေ ကျွမ်းလမ်းပေါ်မှာဗီဒီယို